‘Hakuna Munhu Anofa Achidzokazve Kuzogara Mune Mumwe Munhu’ -Mufundisi David Simango
Reverend David Simango
Mumwe mufundisi wekereke yeZAOGGA Foward in Faith Reverend David Simango vanoti hakuna munhu anofa mweya wake odzoka kuzogar mune mumwe munhu sezvinofungwa nevamwe patsika dzechivanhu.
Muhurukuro neStudio 7 muchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero, Mufundisi Simango vanoti zvinotaurwa muBhaibheri zvekuti mweya waMoses, Elijah nemamwe maporofita zvakasiyana zvachose nezvechivanhu.
Mufundisi David Simango Vanotsanangura Mweya Yevaporofita Vakafa
Kana muine mibvunzo kana kuti muine zvamungada kugovana nevamwe munyaya dzezvechitendero, tumirai mazwi enyu paWhattsAp nhamba yeZvechitendero pa +1-301-919-8140.
Vafundisi neVamwe Vobatana Mukuchema Prophet TB Joshua
Veruzhinji munyika vanoti vasuwiswa zvikuru nekushayika kwemutungamiri wesvondo yeSynagogue Church Of All Nations, Prophet TB Joshua, avo vakashayika neMugovera.
Svondo yeSynagogue Church Of All Nations, kana SCOAN, yakazivisa nezuro nezvekushaya kwemutungamiri wesvondo iyi, Prophet Tomitope Balogun Joshua, avo vanga vachizvikanwa nekunzi Prophet TB Joshua.
Veruzhinji muHarare vakaita saAmai Helen Muganhiwa vanogara mumusha weHatfield vanoti vakamboenda kuNigeria kuchechi yeSCOAN vachirwara vakanobatsirwa naProphet TB Joshua. Amai Muganhiwa vati varwadziwa zvikuru nekufa kwaProphet TB Joshua vachiti kufa murairo waMwari.
Mumwe mugari wekuChitungwiza, Muzvare Nelia Zvandasara, vanotiwo Prophet TB Joshua munhu anga achishumira Mwari ari pachokwadi vachiti mazuvano kwazara maporofita enhema. Amai Zvandasara vati Prophet TB Joshua vaiva muporofita aipa tsanangudzo dzezvinhu zvinoitika.
Mutungamiri wesvondo yeTehillarn Christian Network, Bishop Sam Malunga vati varwadziwa nekufa kwaProphet TB Joshua avo vavati vakararama hupenyu hwavo hwese vachishandira Mwari pamwe nekubatsira vanotambura.
Bishop Ancelimo Magaya vesvondo yeDevine Destiny vaudzawo Studio 7 kuti pane zvakawanda zvingadzidzwa neveruzhinji mukufa kwaProphet TB Joshua.
Bishop Magaya vati yave nguva yekuti mumwe nemumwe azvigadzirire denga dzvene rakevakaurudzira vamwe vatungamiri vedzisvondo kuti vatungamidze Jesu Kristu mumabatiro avanoita basa sezvaiitwa naProphet TB Joshua.
Zvichakadai, mufundisi wesvondo yeProphetic Healing and Deliverance Ministries, Prophet Walter Magaya avo vanoti vanga vachiona Prophet TB Joshua sababa vavo vaudza bepanhau reHerald kuti varasikirwa zvikuru nekufa kwaProphet TB Joshua vachiti vaiwanzotaura mambakwedza nguva nenguva vachipangwa mazano naProphet TB Joshua. Vamwe vatiwo varwadziwa nerufu urwi ndiProphet Uebert Angel vanotiwo vaimboshanda nemufi.
Prophet TB Joshua vanga vachiteverwa nevanhu vakawanda pasi rose avo vatevera mharidzo dzavo pachivhitivhiti cheEmmanuel TV.
Mhuri yemushakabvu yati ichazivisa hurongwa hwekuradzikwa kwavo munguva pfupi inotevera. Prophet TB Joshua vasiya mudzimai Evelyn nevana vatatu.
Prophet TB Joshua Vanoshaya neMugovera
Muporofita TB Joshua vekuNigeria avo vane mukurumbira pasi rose vanonzi vakashaya nemusi weMugover vave nemakore makumi mashanu nemanomwe.
Mashoko ari padandemutande ravo reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa raMwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafa neyi.
Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 Chikumi 1963 uye vaitungamira kereke yeSynagogue, Church of All Nation yaive nemukurumbira pasi rose. Nhepfenyuro dzakaita seVOA Hausa yekuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzaburitsawo mashoko erufu urwu.
Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa neProphet TB Joshua zvakapa kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke iyi yaigarwa nevashanyi.
Kereke yeAnglican Yoita Chibvumirano neCassava Chinobatsira Vagari kuManicaland
Anglican Church Cassava Deal3
Kereke yeAnglican Church mudunhu reManicaland yaita chibvumirano nekambani yeEconet, yeCassava, icho chichasimudzira magariro evanhu munzvimbo dzinoshandira chechi iyi mudunhu iri.
Vachitaura mushure mekusaina chibvumirano ichi, bhishopu veAnglican Church muManicaland, VaErick Ruwona, vati vanotarisira kuti kuumbwa kwembani yechechi yavo yeHoly Trinity Enterprises kuchavandudza mararamiro evagari vemudzinharaunda nekuvawanira mabasa akasiyana siyana ekutengesa zvinhu zveCassava zvinosanganisira Ecosure, Moovar, Maisha, Vaya, neEcoFarmer.
Vati izvi zvichaitika munharaunda dzakasiyana siyana mudunhu reManicaland dzinosanganisira Chipinge, Nyanga, Chimanimani, Mutasa, Makoni, Mutare, uye neWedza kuMashonaland East.
Bhishopu Ruwona vati mushandira pamwe wavapo uyu uchabatsira vanhu munyaya dzehutano pamwe nekurwisa hurombo muvanhu vekumaruwa.
Vachitaurawo mushure mekusaina chibvumirano ichi, mumwe mukuru wekuEcosure, VaGodwin Mashiri, vati vanotarisira kuti hukama hwavepo uhu huchasimudzira magariro evakawanda, kunyanya kumaruwa, uko vati kune hurombo hwakanyanyisa.
VaMashiri vati vanotarisira zvakare kuti chirongwa chavo chichawanisa vagari mabasa uye kushandisa minda nenzira dzinowanisa vagari cheuviri.
Vicar General weAnglican Church, VaAbel Waziweyi, vati vafara zvikuru nedanho ratorwa nekereke yavo rekuedza kusimudzira vanhu mumharaunda dzinowanikwa machechi nezvipatara zvechechi yavo.
Anglican Church Cassava Deal2
Vapinda pachiitiko chanhasi vanosanganisira vakuru vezvikoro zvechechi iyi zviri mudunhu reManicaland, vakuru vemachechi mudunhu iri, pamwe nevamwe vane zvigaro zvepamusoro zveDiocese yeAnglican Church of the Province of Central Africa.
Kubvumbi 04, 2021
MaKristu Opembererera Kumuka kwaMambo Jesu
MaKristu akawanda pasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwechirwere cheCoronavirus chauraya nekubata vanhu vakawanda munyika dzakawanda.
MuAmerica mune vanhu vanodarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million vabayiwa nhomba yeCovid-19, vanhu mune mamwe matunhu vaenda kumakereke.
KuAustralia uko kunonzi hakuna vanhu vari kutapurirana chirwere ichi munharaunda vanhu vakwanisa havo kuenda kuchechi pasina matambudziko.
Asi kuItaly vanhu vari kukurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekuyedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vachitaura past Peter’s Basilica kuVatican, Italy nemusi weSvondo, Pope Francis vati vatendi kuti vasarase tariro munguva ino yekuomerwa nerima rakanzerwa nechirwere cheCovid-19. Vanhu vashoma ndivo vange vari pachiitiko ichi pachityirwa kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers VaDenford Mutashu, vange vari parunhare muHarare
Mumwe mutendi anopinda kereke yeRoman Catholic VaObert Sifile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravano dzikinurwa mukutadza kwavo. VaSifile vanoti chikirisito hupenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
Mumwe mutendi Sister Esther Kurisa vanoti zuva rekumuka kwJwesu rinoreva kutanga kwehupenyu hutsva.
Mufundisi wekereke yeEnd Time Message Brother Tonderai Makaya vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muhupenyu hwechikirisitu vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematauriro, mafungiro nemaoneri ezvinhu matsva.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches -ZCC-Rev Kenneth Mtata vanoti chitendero chechikirisitu chakazembera parumuko rwaJesu uye simba rerufu harichabata mutendi wechokwadi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance uye vari mufundisi VaNelson Chamisa vanoti zororo reEaster richaunza tariro munyika nekuti Mwari vanehanya nenyika ino.
VaChamisa vagkurudzira vanhu kuti vatsungirire sezvo paine chiedza munyika.
Asi vatendi vakawanda avo vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumo famba mumigwagwa mambakwedza vachiimba havana kuita izvi senzira yekuyedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru namazana mashanu munyika.